eNasha.com - नेपालका सेक्सी पुरुष आनन्द कार्की !
नेपालका सेक्सी पुरुष आनन्द कार्की !
विश्वभर कहिलेकाहीँ अनुसन्धान भइरहन्छन् कि सबैभन्दा सेक्सी पुरुष र महिला को हुन् ? तर नेपालमा यस्तो चलन अहिलेसम्म भित्रिसकेको छैन । कसैले को भन्लान् त कसैले को ! तर आनन्द कार्कीको नजरमा सबैभन्दा सेक्सी पुरुष उनी आफैँ हुन् । नपत्याए तल पढ्नुस् !
तपाईँको बारेमा जनताले थाहा नपाएका तीन कुरा ?
झनक्क रिसाउँछु, रिल्याक्स गर्ने किसिमको छु र बाहिरबाट सोझो देखिए पनि भित्रभित्र अलि रोमान्टिक छु ।
नेपालका कुन गायिकासँग युगल गीत गाउने इच्छा छ ?
कोइलीदेवी दिदीसँग । किनभने उहाँ मसँग जहिले पनि रोमान्टिक रुपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ । उहाँसँग एउटा चट्ट परेको रोमान्टिक गीत गाउन पाए हुन्थ्यो ।
यदि शरीरको कुनै अंग बदल्न मिल्यो भने कुन बदल्नु हुन्छ ?
आँखा । किनभने मेरा आँखा अलि ठूलो भइदिए म झनै राम्रो देखिन्थेँ भनी केही व्यक्तिहरु भन्छन् ।
शरीरको सुन्दरता कायम राख्ने उपाय ?
राम्रो खानपिन, व्यायाम, सफासुग्घरीपन । मुख्य कुरा शरीरलाई पनि माया गर्नु पर्छ ।
कुनै महिललाई लिएर संसार डुल्ने अवसर पाउनु भयो भने कसलाई लैजानु हुन्छ ?
श्रीमतीबाहेक अरु कसले चान्स पाउला र - मैले बिहे गरेदेखि उनलाई कहीँ घुमाउने अवसर पाएको छैन ।
ब्रिट्नी स्पेयर्स, म्याडोना र एञ्जेलिना जोलीमध्ये एक जनासँग बिहे गर्नु पर्दा कसलाई रोज्नु हुन्छ ?
एञ्जेलिना । किनभने संसारकी सबैभन्दा सेक्सी महिला उनै हुन् । र, म आफूलाई संसारको सबैभन्दा सेक्सी पुरुष ठान्छु । हाम्रो जोडी खुब सुहाउने थियो !
केटी फकाउने अचूक उपाय ?
केटीहरुलाई सम्मान गर्ने व्यक्तिलाई केटीहरु चाँडै विश्वास गर्छन् । तपाईँ उनीहरुलाई सम्मान गर्नुहोस्, त्यसपछि थाहा पाउनु हुनेछ ।
नेपालकी सबैभन्दा सुन्दर महिला ?
श्रीमती । ऊबाहेक अरु कोही सुन्दर देखिँदैनन् ।
महिलाहरुको सबैभन्दा मन पर्ने कुरा ?
उनीहरुको कुरा गर्ने शैली ।
तपाईँ महिला हुनुभयो भने कोजस्तो बन्न चाहनु हुन्छ ?
लता मंगेशकरजस्तो, जसको आवाज सारा संसारमा गुञ्जिन्छ । राजनीतिमा इन्दिरा गान्धीजस्तो र समाजसेवामा मदर टेरेसाजस्तो । अनि गीतकारमा चाँदनी शाहजस्तो ।
जीवनको अविष्मरणीय क्षण ?
तीन वटा छन् । पहिलो- राजा वीरेन्द्रसँग एक पटक एउटे टेबलमा खाना खाने अवसर पाएको छु । दोस्रो- जीटीभीको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सारेगामा र अन्ताक्षरीमा प्रथम हुन पाएँ । तेस्रो- पाकिस्तानमा एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा महिलाहरुका लागि मात्र दुइ घण्टा कार्यक्रम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । दुइ हजार महिलाले आफ्नो बुर्का फ्याँकेर मसँग गायन-अन्तरक्रिया गर्दाको क्षण म कहिल्यै बिर्सन्नँ ।
संसारको कुन गीत तपाईँलाई मैले गाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
त्यस्तो छैन । बरु यस्तो गीत गाउन सकुँजस्तो लाग्छ, जुन गीतले संसारले मलाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि चिनोस् ।
बच्चाकालको यादगार क्षण ?
स्कूलबाट भागेर खोलामा नुहाउन साथीहरुसँग गएको थिएँ । केही बदमास साथीहरुले लुगा लुकाइदिए । लाजले खोलाबाट निस्कन सकिनँ । तीन घण्टापछि स्कूलका गुरुहरुले थाहा पाएपछि लुगा ल्याइदिएपछि मात्र पानीबाट निस्केको थिएँ ।
तपाईँले अहिलेसम्म कहीँ नभनेको सत्य ?
म एक समय एउटी बाहुनी केटीलाई प्रेम गर्थेँ । तर आमाले बाहुनी बुहारीलाई कसरी खुट्टा ढोग्न दिनू ! भन्नु भयो । आमालाई म यत्ति माया गर्थेँ कि उहाँको त्यो चिन्ताकै लागि भए पनि जात मिल्ने केटीलाई बिहे गर्नु पर्‍यो । यो कुरा मैले मेरी श्रीमतीलाई पनि भनेको छुइनँ ।
भगवान् प्रकट भएर बरदान माग भने ?
देशको शान्ति । मानवजातिमा सद्व्यवहार्को बिऊ रोपिदिन आग्रह गर्थेँ । र, सबै मानिस सङ्गीत र प्रातकालीन व्यायाममा मग्न होऊन् भनी बरदान माग्थेँ ।
सुत्नुअघि के ?
दिनभरिका क्रियाकलाप सम्झेर राम्रो भए भोलिपल्ट पनि यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छु र गल्ती भए त्यस्तो नदोहोर्‍याउन मनमनै कल्पिन्छु ।
बिहान उठ्ने बित्तिकै ?
हत्केला हेर्छु, राम्रा व्यक्तिहरुसँग मात्र भेट होस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्छु ।
जीवनमा मेल खाने गीतको स्थायी या अन्तरा ?
जीवनमा धेरै खोला तर्नुछ,
कति असल हुन्थ्यो होला मेरी मायालु
मायाको डुङ्गा तर्न पाए ।
गायक लुकेका कुरा सङ्गीतकार रिलिज क्या बात ! अवार्ड विचार कीर्तिमान ट्रयाक बाहिर नेपाली तारा समुद्रपार भिडन्त पेज थ्री तातोपीरो उपलब्धि प्रेम र विवाह रुचि गीतकार परिस्थिति गायिका